Home » Entries posted by Nadiya Cali Nuur
Ayaan Ha Oran Mulxidad, Balse …. (Qeybta 2aad)
Asalaamu Caleeykum, Runtii waxaan aad iyo aad ugu farxasanahay sidaa hufan oo mawduceeyga ku saabsanaa arrinta Ayaan Xirsi irrida u furay dood yar, aan marna filaneeynin, in ay dad badan ra’yigooda ka dhibtaan mawduucaas. Siiba, waxaan aad iyo aad ugu farxsanahay in ay jireen qaar igu raacsanaa ra’yigeeyga; oo ahaa in walasheena Soomaliyeed ee wadada [...]
Naadiya Cali: “Mowqifkaygii Ayaan Xirsi weli waa sidiisii, balse markaan wax baan ku darayaa”
Asalaamu Caleeykum, Runtii waxaan aad iyo aad ugu farxasanahay sidaa hufan oo mawduceyga ku saabsanaa arrinta Ayaan Xirsi irrida u furay dood yar, aan marna filaneynin, in ay dad badan ra’yigooda ka dhibtaan mawduucaas. Siiba, waxaan aad iyo aad ugu farxsanahay in ay jireen qaar igu raacsanaa ra’yigeyga; oo ahaa in walasheena Soomaliyeed ee waddada [...]
November 19, 200915 CommentsRead More
Ayaan ha oran Mulxidad, balse…
Waxaan aad uga xumahay in lagu tilmaamo gabadhaan “Ayaan Xirsi” mulxidad (atheist). Mulxidku waa qof aan weligii diin aminsaneyn, hase ahatee, Ayaan waa gabar diinta Islaamka aminsaneyd, kuna soo kortay oona ku soo barbaartay diinta Islaamka, laakiin nasiib daro, waxay diinteeda ay ku gadatay in yaroo lacag ee gaaladu ay siiyeen, siiba kuwa Muslimiinta neceb, [...]
October 25, 20097 CommentsRead More